1.	နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်များကို သိချင်ပါသည်။
ITC ၏ Market Access Map တွင် တိကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် ဈေးကွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ နှင့် စိတ်ဝင်စားသည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ HS-6 ကုဒ် ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်း၏ HS-6 ကုဒ် အတိအကျကိုရိုက်ပြီးလည်း ရှာနိုင်ပါသည်။ (https://www.macmap.org/)
2.	မြန်မာ့ပို့ကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သိချင်ပါသည်။
3.	ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မည်သို့လေ့လာနိုင်သနည်း။
4.	မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်လိုပါသလား။
5.	အရေးယူမှု (Sanctions) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသလား။
6.	အိန္ဒိယသို့ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့သောအခါ အခွန်ပေးရမည်လား။
7.	မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပို့ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့လိုပါက အခွန်ပေးဆောင်ရမည်လား။
8.	ကျွန်ုပ်သည် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ချင်ပါက ခွင့်ပြုချက် လိုပါမည်လား။
9.	ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များ၏ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရသော ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ကြောင်းတရားဝင်ထောက်ခံခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၏ စံချိန်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ စသည်တို့ကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် နည်းလမ်းတကျ အကဲဖြတ်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။
1.	ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့ချင်ပါသည်။ မည်သို့စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
2.	ကျွန်န်ုပ်၏ ကုန်ပစ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းချင်ပါသည်။ မည်သို့ စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
3.	Myantrade သည် တင်ပို့သူများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအညီ ပေးပါသလား။
4.	တင်ပို့သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသော အခြား Website များရှိပါသလား။
5.	Myantrade သည် နိုင်ငံခြားမှ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် မူလဒေသအား သိရစေရန် ကူညီပါသလား။
6.	Myantrade သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရောင်းချရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသလား။
7.	ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Origin) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
8.	နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတွင် အသုံးများသော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကို ဘာသာပြန်ရာ၌ အသုံးပြု‌သော နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများကို နိုင်ငံတကာတွင် ကွဲပြားစွာ ဘာသာပြန်မှုများနှင့် မသေချာမှုများကိုများစွာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများအား အသုံးပြုပုံများကို ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ပိုပြီးသိရစေရန် ၎င်းတို့၏ Website သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/)
9.	Myantrade သည် တင်ပို့ရာတွင် အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား မည်သို့ ကူညီနိုင်သနည်း။
10.	Myantrade သည် နိုင်ငံခြားသို့ ခရီးထွက်ရန်အတွက် ဗီဇာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကူအညီများပေးအပ်ပါသလား။
1.	Myantrade သည် တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အမှာစာကို ဖြည့်ရာတွင် ရောင်းချသူများအား ကူညီပါသလား။
Myantrade ၏ Website တွင်ရှိသော စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများလမ်းညွှန်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://www.myantrade.gov.mm/)
2.	အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သာ အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ပေးပို့ပေးသူ ကို မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
3.	မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာရွက်စာတမ်းဘာသာပြန်သူ သို့မဟုတ် စကားပြောဘာသာပြန်သူကို မည်သို့ ရှာရမည်နည်း။
1.	ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလုံခြုံဆုံးသော နည်းလမ်းမှာ အဘယ်နည်း။
2.	နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များတွင် ဝယ်သူ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သနည်း။
1.	ပင်လယ်စာ၊ သဘာဝထွက်ကုန်များ၊ အစေ့အဆန်များ၊ အပင်မှရရှိသော ထွက်ကုန်များ၊ သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အစရှိသည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သို့တင်ပို့ရမည်နည်း။
2.	ပျားရည်ကို တင်ပို့ချင်ပါသည်။ SPS နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
1.	နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးသတ်မှတ်ရန် အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသလား။
ရောင်းချလိုသည့်ဈေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်သူများ၏ ဈေးသတ်မှတ်ချက်များကို လေ့လာခြင်းသည် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကို ဈေးသတ်မှတ်ခြင်းမဟာဗျူဟာ၏ ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ Myantrade သည် Kompass ရှိ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ဈေးကွက်များတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးသတ်မှတ်ရာ၌ အကူအညီများပေးပါသည်။ (https://www.myantrade.gov.mm/ )
1.	မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများမှ အကျိုးအမြတ်များကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
2.	ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်း (Rules-of-Origin) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့သည် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုများနှင့် ကုန်စည်စည်းကြပ် အခွန်များအပေါ် မည်သည့် သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
1.	နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဈေးကွက်သုတေသနဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သနည်း။
2.	ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ရှိ အကောက်အခွန်များ ကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
3.	ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သနည်း။
4.	ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိ လက်ရှိ စီးပွားရေးဝန်းကျင်မှာ အဘယ်နည်း။
5.	အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအား ပထမဆုံးအကြိမ် အဝတ်အထည်များတင်ပို့ချင်ပါသည်။ မည်သို့စတင်ရမည်နည်း။
6.	ကျွန်ုပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အချိုနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကို တင်ပို့ချင်ပါသည်။ ဈေးကွက်အချက်အလက်ကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
1.	ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြပွဲ၊ ပြခန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များအား မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
Myantrade တွင် ကျင်းပလာမည့် သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးပြပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။ (https://www.myantrade.gov.mm/)
1.	မြန်မာနိုင်ငံမှ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအား မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
2.	ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ တင်ပို့သူများအား မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
3.	Myantrade သည် နိုင်ငံခြားမှ အလားအလာကောင်းသောတင်သွင်းသူများ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ကူညီပါသလား။
4.	နိုင်ငံခြား ဈေးကွက်များတွင် ဝယ်သူ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်ပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သနည်း။
5.	နိုင်ငံခြားမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်သည် တရားဝင်မှု ရှိ၊ မရှိကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။
နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီများ ရနိုင်ပါသလား။